NetBeans 12.2 bịarutere na nkwado maka atụmatụ ọhụrụ na Java, PHP na ndị ọzọ | Site na Linux
Emeela NetBeans 12.2 na n'ime ụdị ọhụụ a, Apache Foundation kwupụtara na NetBeans 12.2 nke kachasị na-enye nkwado maka atụmatụ ọhụrụ akọwapụtara na JDK 14, JDK 15, na PHP 8.
Maka ndị na-amaghị NetBeans, ị kwesịrị ịma nke ahụ bụ IDE (Integrated mmepe gburugburu ebe obibi) maka Java, ebum n’uche ya bụ ime ngwangwa iwu ngwa Java, gụnyere ọrụ weebụ na ngwa maka ekwentị mkpanaaka.
Na mgbakwunye na arụmọrụ ọkọlọtọ, enwere ike ịgbatị ya na nkwado maka asụsụ mmemme C na C ++, nkwado maka okike nke ngwa na ihe owuwu SOA, ojiji nke XML na XML schemas, BPEL na Java Web Ọrụ ma ọ bụ UML ịme ngosi uwe. Mgbakwunye NetBeans Profiler na-enye gị ohere ịgbaso ojiji CPU na ojiji nchekwa nke ngwa enyere.
N'aka nke ọzọ, NetBeans Mobility Pack na-agbakwunye debugger na gburugburu ebe obibi NetBeans nke na-enye gị ohere inyocha usoro nke mmemme mkpanaka.
Edere NetBeans na Java, nke mere ka ọ gbanwee na ọ nwere ike na-agba ọsọ dị iche iche usoro nyiwe (Windows, Linux).
1 Banyere NetBeans 12.2
2 Etu esi etinye NetBeans na Linux?
Banyere NetBeans 12.2
Ntughari ohuru nke NetBeans 12.2 biara n’oge na adighi anya mgbe onwa abuo putara. NAVersiondị ọhụrụ a na-agbakwunye ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ gaa IDE na-emeghe ma me ka mmelite ụfọdụ na ọba akwụkwọ dị iche iche.
Nke a gụnyere Nkwado maka atụmatụ Java ndị metụtara JDK 14 na 15, mgbakwunye nke Java Editor na Java Debugger na Visual Studio Code (VS Code), atụmatụ ọhụrụ maka JavaFX na Java Web, na ndị ọzọ.
Ọzọkwa, a na-agbakwunye nkwado maka ụdị PHP 8Na nke a, ndị ọrụ NetBeans nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụụ ha nwere, gụnyere ụdị ndị sonyere, onye ọrụ Nullsafe, na ụdị nloghachi ahụ. Nkwado maka Oracle Jet, nke ogologo oge gafere, ugbu a ewepụla maka ezi.
E kwukwara na imepụta klaasị ọhụụ, ihu na enum site na ịdefe ederede na mpempe akwụkwọ.
N'akụkụ nke ngwa ọrụ mmepe weebụ Java, ekwuru ya na Nkwado maka oge opupu ihe ubi 5.2.9 MVC ka etolitela. Na mkparịta ụka maka ịdezi njirimara nke ọrụ weebụ, agbanweela nchekwa nke URL yana njikọ njikọ. E wepụrụ ngwakọta Derby na modulu Payara Server.
A kwadoro koodu nkwado JavaFX iji kwado ihe ndị na-adịghị agbanwe agbanwe.
Nkwado agbakwunyere maka ọrụ PHP 8 ọhụrụ.
Javac compiler ejedebere na otu ihe atụ.
Ewepụla nkwado ochie maka Oracle JET.
Nkwado CSS3 emelitere.
Emelitere nsụgharị Ant 1.10.8, exec-maven-plugin 3.0.0, Gradle Tooling API 6.7, JDBC PostgreSQL 42.2.16, payara-micro-maven-plugin 1.3.0, Spring Framework 4.3.29, TestNG 6.14.3.
Nchọpụta nke JDKs arụnyere na SDKMan na Debian.
Nkọwapụta na igbu onwe onye nwere ikike mgbe ọrụ Gradle na-enye ọrụ kwesịrị ekwesị.
Etu esi etinye NetBeans na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye NetBeans na nkesa Linux ha, ha nwere ike ịme nke ahụ site na isoro ntuziaka anyị kesara n'okpuru.
Otu n'ime ụzọ iji wụnye IDE a na Linux bụ site na nbudata ihe nrụnye ma na-agba ọsọ ya. Naanị ihe achọrọ bụ ịwụnye Java.
Ugbu a, anyị ga-enweta ihe nrụnye site na njikọ dị n'okpuru.
Ozugbo ị wụnyechara ihe niile mgbe ahụ, mepee faịlụ ọhụrụ ebudatara n'ime ndekọ nke mmasị gị.
Site na ọnụ anyị ga-abanye na ndekọ ndekọ a wee mezuo:
Iwu Apache NetBeans IDE. Ozugbo wuru i nwere ike na-agba ọsọ ahụ IDE site na iji kọmputa ede
Installationzọ ntinye ọzọ bụ site na enyemaka nke ngwugwu Flatpak, yabụ naanị anyị nwere nkwado iji wụnye ụdị ngwugwu a na sistemụ anyị.
Enwere ike ime nwụnye ahụ site na njedebe site na iji kọmputa ede iwu ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » NetBeans 12.2 bịarutere na nkwado maka atụmatụ ọhụrụ na Java, PHP na ndị ọzọ